Global Voices teny Malagasy » Mihetsika Noho Ny Fandrahonana Fandroahana Ny Iray Ain’ireo Mpikambana Ny Tontolombolongana Maraokana no Sady Manome Voninahitra Ny Fahafatesan’i Fadi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Desambra 2018 19:03 GMT 1	 · Mpanoratra Farah Kinani Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona
Amin'ity herinandro ity, mankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'ny mpaminany (PBUH) ny tontolombolongana silamo. Arahabaina avokoa nahatratra ny Eid Al Mawlid  ry blaogera miozolomana rehetra.
Handroaka sa… tsy handroaka!
“Sambany” tao MAraoka. Blaogy iray mikasika ny fampiasana tafahoatra loatra ny vola maraokana nitarika ny fialàn'ilay mpampiasa tafahoatra ny mety  (Frantsay). Saingy mifarana eto ny vaovao tsara, tsy misy asa tsara hipetraka ho tsy voasazy izany. Rachid Jankari, blaogera mpanao gazety, mpanoratra an'ilay vaovao tsy manam-paharoa dia tsy maintsy namafa ny lahatsoratra mikasika ilay hadalana teo amin'ny blaoginy na ho very asa!
Nofafàn'ilay blaogera ilay lahatsoratra nefa avy eo hitany mivoaka any anatin'ireo blaogy maraokana marobe hafa ilay izy mba ho firaisankina.
Naharay imailaka iray amin'ny mpampiasa an'ilay blaogera mpanao gazety i Othmane Boumaalif (Frantsay) izay anisany iray tamin'ireo blaogera voalohany naneho ny fanohanany an'i Jankari, nanamarihany fa tsy nandrahona an'i Jankari velively izy (Frantsay) . Na izany aza, nosoratan'ilay mpampiasa tao anaty imailaka fa tsy an'ny tena manokana mihitsy akory ny fanoratana blaogy.
Raha mbola tsy mafy ny mozikanao, tsy hisy hisahirana hanelingelina anao eo. Raha vao tsy voatandrina intsony ny zavamisy, tonga handom-baravarana ao aminao ireo mpiray vodirindrina aminao ary mangataka anao hampihena ny hamafiny. Tsy handroaka anao ao an-tonkantranonao izy saingy miangavy anao hanaja ny manodidina.
Hmm..Azonao ve ry Jankari?
Naharay imailaka iray mitovy amin'io i Mohamed Slimani ary milaza izy fa ny “resaka firaisana vodirindrina” no nanosika azy hanao ny lahatsorany manaraka!
Manontany tena i Bla francya raha toa hitovy fiafara amin'ny an'ireo sinoa sy toniziana  (Arabo) koa ny tontolombolongana maraokana, firenena roa izay androahana ny bilaogera ho sazin'ny fahasahiany.
Milaza i M.S.Hjiouj fa sarotra taminy ny nanakatra ny “olana” satria amin'ny teny frantsay avokoa ireo lahatsoratra rehetra mikasika io azy io. Ary mangataka amin'ireo blaogera mpiara-miasa aminy izy mba hanomboka hieritreritra hanoratra an'ireo lohahevitra mafonja ho amin'ny teny Arabo  (Arabo), satria tsy mamaky ny teny frantsay ny olona rehetra ao Maraoka.
Ny hany teboka miabo amin'io tantara ratsy io dia ny fahitàna fa manjary mahasarika ireo blaogy ao Maraoka.
Miray hina isika…mibilaogy!
Nanoratra mikasika ny asa firaisankina tsy mbola nisy toy izany tao anaty tontolombolongana maraokana i Larbi, tao anaty lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe ‘Un air frais’ .
Maneho ny fanohananay an'i Jankari izahay..
Namerina nandefa ilay lahatsoratra manafintohina” i Bluesman mba hanehoany ny firaisankinany amin'i Rachid Jankari.
Tezitra mafy amin'ilay trangan-javatra manontolo  (Frantsay) i Mchicha, mandefa ilay lahatsoratra nosoratan'i Jankari voafafa izy ary miteny fa:
Tofoka aho! Hazain'izy ireo ny fahalalahana maneho hevitra na dia any anatin'ireo blaogy aza!
Na dia fantany aza fa porofon'ny fisarihana vaovao ananan'ireo blaogy ao Maraoka io raharaha io , manambara i Nadia fa misedra zava-tsarotra ny fianakvian'i Rachid.
Milaza i Adnane fa toy ny baomba ny fiantefan'ilay lahatsoratr'i Jankari, ary maneho ny firaisankinany amin'ny alalan'ny fandefasana azy io indray tao anaty blaoginy izy.
Eo ampiandrasana ny fihetsiky ny Firaisankinam-pirenen'ireo Maraokàna Mpanao gazety  (Arabo) i Wadih. Manoratra izy fa miasa ao anaty toe-draharaha sarotra ireo Maraokàna mpanao gazety ary mila fiarovana betsaka kokoa araka ny lalàna
Dera ho an'i Fadi 
Mbola misaona an'i Fadi ny tontolombolongana Maraokana, izay vao maty tamin'ny herinandro lasa.
Nanokana ny hafany farany ho an'ilay blaogera maty i Loula .
Voninahitra ho ahy ny nahafantarana anao!
Mitomany an'i Fadi namany i Salma ary manome voninahitra azy  (Frantsay).
Ianao no blaogera nisy fiantraikany betsaka indrindra tamiko!
Nahafantatra zavatra betsaka avy amin'i Fadi i  Manal . Veloma farany ho an'ny namana iray tsy foiny no lahatsorany farany.
Tena latsaka tanteraka tao anatin'ny “fambaboan”ny blaogin'ilay mpampianatra aho. Hitako ho tena mahaliana ilay hevitra ary na dia tsy misy zavatra goavana ho lazaina mikasika ny mpanoratra aza, satria tsy mamoaka vaovao momba azy izy, tsy manakana ahy tsy hisaotra azy izany noho ireo asa nentin'ny blaoginy ho an'ireo maraokàna mpianatra ao amin'ny lisea.
Hamida Mentoufa (Hamida ngita volo) dia ramatoakely Maraokana izay mikatsaka ny hanohy ny fiainany “ara-dalàna” ao anatin'i Casablanca  lehibe, be tabataba ary ifangaroanà olom-pirenena maro. Tantara fohy tsy misy fiafarana momba ireo fahavoazany mandreraka ny sainy ireo lahatsoratra. Tena mampihomehy indrindra indrindra ho an'ireo izay, toa ahy, niaina tao Casablanca  ary “saika” niaina fahavoazana mitovitovy amin'ny an'i Mentoufa ilay tokana tsy mifangaro. Mirary fitsikiana ho an'ny rehetra!
Izay indray ary no azo atolotra amin'ity herinandro ity. Amin'ny Alarobia ho avy indray, Inshallah!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/30/131958/
 Eid Al Mawlid: http://en.wikipedia.org/wiki/Mawlid
 fampiasana tafahoatra loatra ny vola maraokana nitarika ny fialàn'ilay mpampiasa tafahoatra ny mety: http://boumaalif.canalblog.com/archives/2006/04/07/1661157.html
 i Othmane Boumaalif : http://boumaalif.canalblog.com/
 tsy nandrahona an'i Jankari velively izy : http://boumaalif.canalblog.com/archives/2006/04/10/1680889.html
 hitovy fiafara amin'ny an'ireo sinoa sy toniziana: http://blafrancia.blogspot.com/2006/04/blog-post_10.html
 mba hanomboka hieritreritra hanoratra an'ireo lohahevitra mafonja ho amin'ny teny Arabo: http://www.mshjiouij.com/2006/04/10/240/
 Tezitra mafy amin'ilay trangan-javatra manontolo: http://mchicha05.blogspot.com/2006/04/en-soutien-avec-m-rachid-jankari.html
 Nadia : https://twitter.com/nadialamlili
 Firaisankinam-pirenen'ireo Maraokàna Mpanao gazety: http://iwablach.blogspot.com/2006/04/blog-post_08.html
 manome voninahitra azy: http://selma-janati.blogspot.com/2006/04/toi.html
 Nahafantatra zavatra betsaka avy amin'i Fadi i: http://manal.over-blog.com/article-2368310.html